Global Voices မြန်မာ · ဇွန် 2014
သတင်းဆောင်းပါးများ from ဇွန်, 2014
“စ​ပိန်​ကို ဆုံးဖြတ်​ခွင့် ပေးလိုက်​ပါ”
အနောက်ဥရောပ 19 ဇွန် 2014
အစ္စဘယ်အွန်က သူ့ဘလော့(ဂ်)ဖြစ်သော ဆွန်ရိဆာ အီ အက်စပါ့(စ်) [အပြုံးများနှင့် ဓားများပေါ်]တွင် စပိန်ဘုရင် ဝမ် ကားလို့(စ်) နန်းစွန့်မှုကို ရေးသား [es] ခဲ့သည်မှာ ahora que se abre un debate de “Monarquía vs República”, “Felipe sí, Felipe no”, “Referéndum sí o no”, todos pongamos de nuestra parte y apliquemos una de las máximas que tuvieron Juan Carlos y Adolfo Suárez:...
ပညာ​ရေး​တွင် သင်္ချာ​၏ အရေး​ပါ​မှု
လက်တင်အမေရိက 17 ဇွန် 2014
Chlewey ဘ​လော့(ဂ်)မှ ကား​လို့(စ်) သော(ပ်)ဆန်​က နိုင်ငံတကာ ပညာ​ရေး အရည်အသွေး စစ်ဆေး​မှု [es] တွင် အဆင့်​နိမ့်​ခဲ့​သည်​နှင့် ဆက်​စပ်​၍ ကို​လမ်​ဘီ​ယာ​တွင် သင်္ချာ​ပညာသင်​ကြား​ရန် အရေး​ပါ​ပုံ​ကို ရေးသား​ခဲ့ [es]သည်မှာ Las matemáticas dan mucho más que la capacidad de contar las vueltas en una tienda; o las destrezas específicas para entrarauna facultad de ingeniería. Las matemáticas generan una estructura mental que...
သမိုင်း​ဦး​မ​တင်​မီ​ခေတ်​က ရုပ်​ကြွင်း​များ ချီ​လီ​တွ​င်တွေ့ရှိ
လက်တင်အမေရိက 15 ဇွန် 2014
အစ်(ခ်)သီအိုဆော (ရေနေတွားသွားသတ္တဝါကြီးတစ်မျိုး) ၄၆ကောင်၏ ရုပ်ကြွင်းများသည် ၂၁ရာစုမတိုင်မီအထိ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ တိပ်မြုပ်နေခဲ့သည်မှာ ရုပ်ကြွင်းလေ့လာသူတစ်စုက ချီလီတောင်ပိုင်းရှိ တောရက်(စ်) ဒေး(လ်) ပိုင်နယ် အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ၄င်းတို့အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုမီအထိ ဖြစ်သည်။ #Adictos_a_lo_Jordan Descubren en Chile cementerio de ictiosaurios: El proyecto comenzó con la … http://t.co/KDvFkJPADB [ #Luispokel ] — POoiint BeeSa BuenO (@MOreniitO_POiNT) Mayo 31, 2014 ချီလီတွင် အစ်(ခ်)သီအိုဆော သင်္ချိုင်းတစ်ခုအား တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန်း စတင်ခဲ့ပုံမှာ Hallan en Chile...
မိုက်​ခ​ရို​ဆော့(ဖ်) အသိ​အမှတ်ပြု​လက်မှတ်​ရ ပထမ​ဆုံး ကျောင်းသား ဇမ်​ဘီး​ယား​လူ​ငယ်
အာဖရိက ကန္တာရဒေသခွဲ 14 ဇွန် 2014
A fifteen year old boy of Zambian origin has wowed the world of information and communication technology (ICT) by becoming one of the youngest Microsoft Technology Associates (MTA) in Europe.
အရှေ့အာရှ 13 ဇွန် 2014
မော်(လ်)ဒိုက်(ဗ်)မှ လိင်​တူ​ချစ်​သူ နိုင်ငံ​ရေး​ခိုလှုံ​ခွင့် လျှောက်ထား​ခဲ့​သူ​သည် ပြန်​အလာ​တွင် ဖမ်းဆီး​ချုပ်​နှောင်​ခံ​ခဲ့​ရ​ခြင်း
တောင်အာရှ 12 ဇွန် 2014
ရှရီးယားဥပဒေအရ လိင်တူချင်း ချစ်ကြိုက်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်မထပ်ဘဲ အတူနေခြင်းအားလုံးသည် မော်(လ်)ဒိုက်(ဗ်)တွင် တရားမဝင်ပေ။ လိင်တူချစ်သူများအား ဖမ်းဆီးဖိနှိပ်သည့် အမှုများလည်း များစွာရှိခဲ့သည်။ သမ္မတရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီဘရာဟင် မူအက်(ဇ်)က ဘာသာရေးအရဖြစ်စေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရဖြစ်စေ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူ မော်(လ်)ဒိုက်(ဗ်)လူမျိုးများသည် ပြန်လာခဲ့လျှင် ဖမ်းဆီးဖိနှပ်ခြင်း ခံရမည်မှာ သေချာကြောင်းကို လတ်တလော ပြောဆိုထားသည်။ ထိုမှတ်ချက်သည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရသူ လိင်တူချစ်သူ မော်(လ်)ဒိုက်(ဗ်)လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည့် အီဘရာဟင် နိမ်းက ဆုရမိန်းမလျာဖြစ်လာပြီးနောက်တွင် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မော်(လ်)ဒိုက်(ဗ်)ရှိ တကာဥပါ ဘလော့(ဂ်)ရေးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဟီလတ်(သ်)သည် ၄င်း၏ လိင်တိမ်းညွတ်မှုအား ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုခြင်းကြောင့် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးနောက် သီရိလင်္ကာတွင် တိမ်းရှောင် နေထိုင်လျက်ရှိသည်။...
တက္ကသိုလ်​ကျောင်းသား​တစ်​ဦး မိမိ​ကိုယ်​ကိုယ် သေ​ကြောင်း​ကြံစည်​မည့် မှတ်စု​တစ်​ခု ဖေ့စ်​ဘုတ်ခ်​တွင်​တင်၊ သူငယ်ချင်း​များ​က အချိန်မီ မ​ကယ်ဆယ်​နိုင်​ခဲ့
တောင်အာရှ 10 ဇွန် 2014
မိမိ​ကိုယ်⁠ကိုယ်​သေ​ကြောင်း​ကြံစည်​မှု​သည် ဘင်္ဂ​လား​ဒေ့ရှ်​တွင် ကာလ​ရှည်​ကြာ​ရှိ​ခဲ့​သော လူ​မှု​ပြသ​နာ​တစ်​ခု ဖြစ်​ကာ ကမ္ဘာ​တစ်​ဝှမ်း​မှ တင်ပြ​ချက်​များ​အရ နှစ်စဉ်​သေဆုံး​မှု​၏ ၂.၀​၆ ရာ​ခိုင်​နှုန်းရှိ​သည်။ ဒါ​ကာ​တက္ကသိုလ်​မှ ကျောင်းသား​တစ်​ဦး​ဖြစ်​သူ မာ​ဘဘ်​ရှ​ဟာန်း​က မိမိ​ကိုယ်​ကို သေ​ကြောင်း​ကြံစည်​မည့်​ပို့စ်​တစ်​ခုကို ၂​၀​၁​၄ ဇွန်​လ ၂ ရက်၊ ည ၇ နာရီ ၈ မိ​နစ်​တွင်​တင်​ခဲ့​သည်။ သူ​ရေး​ခဲ့​သည်မှာ - I am lying on Rail Line. The Train is coming. And I am going to kick out bloody myself, the useless eater. Once I've...
တာ​ဂျစ်​ကစ္စ​တန်​ရှိ လိင်​တူ​ချစ်​သူ​များ​အတွက် “အသေးစား အောင်မြင်​မှု” ဖြစ်သော မင်္ဂလာဆောင်
အာ​ရှ​အလယ်​ပိုင်း​နှင့် ကော်​ကေး​ရှဒေသ9ဇွန် 2014
တာ​ဂျစ်​ကစ္စ​တန်​မှာ ပထမ​ဆုံး ကိန်း​ကြီး​ခန်း​ကြီး​မ​နိုင်​တဲ့ လိင်​တူ​ချစ်​သူ​လက်ထပ်​ပွဲ​တစ်​ခု​ကို ကျင်းပ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ တာ​ဂျစ်​လူ​မျိုး တော်တော်​များ⁠များ​ကတော့ အဲ​ဒီ​လက်ထပ်​ပွဲ​က "အနောက်​နိုင်ငံ​တွေ​ရဲ့ ဝါဒ​ဖြန့်​ခြင်း"လို့ ယူဆ​ပြီး မ​ကျေနပ်​ကြ​ပါ​ဘူး။